Izikhukhula zishiye kukhalwa eMnambithi - Ilanga News
Home Izindaba Izikhukhula zishiye kukhalwa eMnambithi
Izikhukhula zishiye kukhalwa eMnambithi
lzitolo eziningi zisavaliwe ngenxa yamanzi asagcwele umgwaqo
UNKK Nonhlanhla Ntshingila (okwesobunxele) ubechazela ILANGA ngokumuka komfowabo, uMnu Sabelo Mdluli okugcine kutholakala isidumbu sakhe izolo ngoLwesithathu, eceleni kwakhe nguNkz Sebenzile Hlongwane ongunina. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
ANOVALO amalungu omphakathi waseMnambithi ngesimo sezulu njengoba amanye ethi kawazi ukuthi angamisa kanjani uma ingaphinde ibuye imvula eshiye kukhalwa kuleli dolobha ngempelasonto, yaliphendula idamu njengoba imigudu yokuhamba amanzi ingekho esimeni esihle. Ngaphandle nje kokuphendula leli dolobha idamu, kunowesilisa onguMnu Sabelo Mdluli oshonile emuva kokumuka nomfula iGcizela ngeSonto, isidumbu sakhe saze satholwa izolo ngoLwesithathu. Izindawo eziningi okubalwa nezitolo silobe izolo zisavaliwe eMnambithi ngenxa yamanzi asagcwele eminye imigwaqo. ILANGA lihambele kule ndawo ngoLwesibili ukuyokubona umonakalo.
Lifice abanikazi bamabhizinisi bematasa bekhipha amanzi ezindaweni abasebenzela kuzona. Babodwa abebekhala ngokushayeka njengoba kungaqhubeki ukusebenza njengoba amanzi abesagcwele. Uma ungena edolobheni, kuvele kucace ukuthi bekuhlasele uzamcolo ngenxa yamanzi. Ekhoneni lomgwaqo uFarbers Street noPrincess Street, bekungahambi lutho, kanti nemizi yabantu ekule migwaqo ibigcwele amanzi acishe afike okhalweni uma ungena phakathi. UMnu Mohamed Hossen, onebhizinisi lokukhanda izimoto kuleli dolobha, uthe umonakalo uzodla imali engaphezu kwesigidi njengoba kunezimoto zabantu ezonakele emuva kokumbozwa ngamanzi.
UMnu Bongani Ndukuya osebenza kuleli galaji, uthe bashayeke kakhulu ngoba kabasebenzi selokhu kwenzeke lo monakalo. “Kasazi ukuthi singenzenjani uma ingabuya le mvula ngoba kumanje kasisebenzi. Lokhu kusho ukuthi ngeke siyithole imali ephelele ngaphandle uma umqashi engasizwela. “Besicela ukuba iziphathimandla zilungise izitamkoko ukuze uma kunamanzi amaningi, zizolekelela ukuthi okungenani angene kuzona,” kuzikhalela yena. UNkz Nomuthi Mofokeng uthi idlela umonakalo omkhulu ngayo, ngisho engena endlini yakhe kumele afake amabhuzu ngenxa yamanzi. “Ngisizwe wukuthi umbhede ngiwubeke phezu kwezitini ukuze ungeke ube manzi. Uma siya edolobheni akuhambeki ngoba kumele siwele kuwona lo mgwaqo ogcwele amanzi,” kusho yena. Ekhuluma neLANGA uNkk Nonhlanhla Ntshingila, ongudadewabo kaMnu Mdluli omuke namanzi, ubonge umphakathi wangakubo obuthungatha umfowabo kusukela wamuka ngeSonto.
“Umfowethu ubengahlali lapha ekhaya isikhathi esiningi, ubevame ukuba sedolobheni eMnambithi. Ngelanga amuka ngalo, wayesendleleni eza lapha ekhaya wayowela emhosheni oseduze nomfula. “Ngathola umbiko ngeSonto ntambama kuthiwa mangiyobheka uSabelo umuke nomfula. Saya ukuyobheka kodwa sangamthola. “Omunye umakhelwane uvolontiyile ngeloli lakhe ukuqoqa amadoda endawo asuke eyobheka ehla njalo nomfula,” kusho uNkk Ntshingila. UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka uhambele le ndawo ngoLwesibili ephelezelwa yiMeyayasoThukela, iNkosi Ntandoyenkosi Shabalala. Esitatimendeni somnyango, uMnu Hlomuka uthi uhulumeni uzibophezele ekutholeni isixazululo esizovikela umphakathi esikhathini esizayo uma kunezikhukhula.
Previous articleAbazali bazibambele mathupha kuvulwa izikole
Next articleIkhehla (75) “lidubule labulala” isalukazi (69)